के विषय पुस्तक चर्चा गर्छ? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
JTDean • जनवरी 27, 2015 मा 11:39 छु • जवाफ
मैले साथ नयाँ कम्पनी भनिन्छ उदय लगाया थिए त्यसैले पागल छ, ताकि राम्रो गरेन ,तर म बल भन्ने युवा र यो एक मसीही जानें गर्न को लागि सुपर कूल छ कि पुरानो उत्पादन यो नयाँ पुस्तक पढ्न माथि लागेका छु, तपाईं एनबीए जानुहोस् सकेन,एनएफएल, MLB. फूटबल खेल, रन ट्रैक, ट्रयाक उत्पादन, एक अभिनेता बन्न, वा अभिनेत्री. आकाश को सीमा छ, जहाँ त्यहाँ प्रभु बास आत्मिक, त्यहाँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचार स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता छ. म तपाईं को लागि आभारी छु Lecrea ,Tedesi,र द बाट सबैजना 116 क्लिक गर्नुहोस् ,हामी दिनुहोस् परमेश्वरको महिमा ,हामी परमेश्वरको प्रशंसा दिनुहोस् र यो नयाँ पुस्तक उदय प्रचार गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन !!!!!!!उहाँले योग्य छ ,उहाँले Praised गर्न को लागि योग्य छ!!!
दाऊदले • मार्च 29, 2015 मा 5:06 बजे • जवाफ
के एउटा उत्कृष्ट पुस्तक! यात्रा ली सबै किशोरका लागि पढ्न पर्छ पुस्तक लेखिएको छ. म यसलाई तल राख्न सक्छ.5बाहिर5तारा.
दाऊदले • मार्च 29, 2015 मा 5:18 बजे • जवाफ
यात्रा, म पनि आफ्नो सुत्ने मुद्दाहरू बारेमा प्रार्थना गरिएको छ।;) तपाईं राम्रो महसुस आशा:डी
Yves • सक्छ 30, 2015 मा 2:14 छु • जवाफ
यात्रा, म पढाइ मा कहिल्यै. तर परमेश्वरले शाब्दिक मेरो निद्राबाट उठेँ र मलाई आफ्नो पुस्तक किन्न विश्वस्त “उठेर”. मानिस, म यसलाई समाप्त छैन तर म लगभग सामना छु भन्ने महसुस 99.9% समस्या को तपाईं उदय बारे कुरा गर्दै छन्. कि मेरो निको र परिवर्तन तिर पहिलो चरण साकार छ. यो एक ठूलो पुस्तक मानिसको, र मलाई हिप हप संस्कृति प्रेम हुनुको साथ, म एक Rapper / पादरी मार्फत मलाई बोल्ने लागि प्रभु प्रशंसा. म पूर्ण रूपमा यसलाई बताउन सक्नुहुन्छ…
र थप एक कुरा, म एक Rapper भन्दा एक लेखक रूपमा राम्रो रुचि तर यो परमेश्वरको महान कहानी मा एक ठूलो काम गरिरहेको राख्न :)
बोल्ट • जुन 4, 2015 मा 1:09 बजे • जवाफ
यात्रा ली tha सर्वश्रेष्ठ! यहाँ नाइजेरिया मा भन्दा आफ्नो काम मोल. तपाईं आशिष् ब्रो, धन्यवाद. @iamslizybolt #rhemaprocess #116
पीके • जुन 26, 2015 मा 3:25 बजे • जवाफ
यात्रा, म आफ्नो पुस्तक केही महिना पहिले किनेको र म साँच्चै तपाईं कसरी वास्तविक प्रेम. म हाम्रा प्रभु सेवा गर्न आफ्नो आवेग पराउँछु र यसलाई परमेश्वरले हामीलाई बाँच्न चाहन्छ बाटो बाँच्न जारी मलाई उत्प्रेरित गर्छ. म एकदम म थोडे भनेर पुस्तक कारण संग गरेको होइन7बजे तर्क lol क्षण मा जा! तर म साँच्चै आफ्नो पुस्तक प्रेरित छु. धन्यवाद, भाइ! परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष!
एलन • जुलाई 17, 2015 मा 11:24 छु • जवाफ
ख्रीष्टमा आशीर्वाद भाइ
चारा star name • अगस्ट 7, 2015 मा 9:33 छु • जवाफ
म त यो पुस्तक छ गर्न उत्साहित छु!! म अनलाइन अर्डर र यसलाई आउन म प्रतीक्षा गरिएको छ. म निश्चित म त यो एक आकर्षित थियो किन, म मेरो पुस्तक तखता मा धेरै अन्य पुस्तकहरु म पढ्न भनेर गरेका छैनन् र साँच्चै कुनै पनि समय चाँडै पढ्न योजना छैन छ विशेष गरी विचार :-) तर म वृद्धिमा प्रतीक्षा गरिएको छ र अन्ततः हिजो आए. म घर पुगेपछि त्यहाँ ढोकामा प्याकेज थियो र म यो पुस्तक हुन अपेक्षा. बाहिर जान्छ पुस्तक USPS पठाइएको थियो र मेरो मेलबक्स थियो. ढोकामा प्याकेज म आदेश जूता को एक जोडी थियो. म साँच्चै जूता लागि कुरा छ र म पूर्ण रूपमा म तिनीहरूलाई आदेश भूल किनभने यो त महत्वपूर्ण छ. मेरो श्रीमान् पनि म एक जोडी को फ्याँकिन् नभएसम्म म यो घर मा जूता को अर्को जोडी ल्याउन आवश्यक छैन भने. कि मलाई त्रुटिपूर्ण सोच छ :-) सायद उहाँले अन्तिम रात जूता बारे केहि भन्न थिएन किनभने मेरो तर्क संग पक्रने छ!! जे भए पनि, बच्चाहरु ओछ्यानमा गए पछि म पढेर उदय र अध्याय सुरु2म त पुस्तक आकर्षित भएको थियो किन म थाह. कारण टिप्पणी खण्डमा सूची पनि धेरै छन्, तर म अध्याय छु4अहिले र पहिले नै मलाई मात्रा बोली छ. मुख्यतया बाटो को यो लिखित र अन्य कुराहरू कसरी लिंक छ किनभने. जे भए पनि, म उत्साहित छु र म पहिले नै आशिष् गरिएको छ. म अब पढेर जारी जाँदैछु तर म यो टिप्पणी लेख्न एक ब्रेक लिए.
अक्षहरूमा • डिसेम्बर 15, 2015 मा 1:39 छु • जवाफ
pst. यात्रा u've मलाई वास्तविक blessin भएको. एन डी म साँच्चै Makin मलाई मुठभेड लागि परमेश्वरको आशीर्वाद यू. यहाँ नाइजेरिया हाम्रो स्थानीय चर्च अझै पनि ग र्याप रूपमा NT vry मसीही हुनुको
RobinRicheson • मार्च 25, 2016 मा 12:15 छु • जवाफ
म आफ्नो पुस्तक यसलाई किन्न र पढ्न अर्थ गरिएको छ तर जीवन कहिलेकाहीं त व्यस्त हुन्छ. अझै व्यस्त amidst, मेरो परिवार र मेरो दैनिक जीवन, ख्रीष्टको सधैं पहिलो आउँछ.
यहाँ ओयन्सबोरो हाम्रो शहर मा, KY. मेरो चर्च मार्फत मित्र पापी भनिने कार्यक्रम छ. पापी मित्र एक ख्रीष्ट-केन्द्रित आवासीय पदार्थ रिकभरी बाइबलीय सत्य मार्फत ख्रीष्टको पुनर्स्थापना र पुरुष र महिला को मेलमिलाप ध्यान कार्यक्रम छ, उत्तरदायित्व, र जीवन कौशल. . .हामी क्षमा खोज्न ख्रीष्टमा भाइबहिनीको सक्दो प्रयास गर्छौं, आफ्नो गल्तीबाट सिक्न, परमेश्वरको थाहा र उहाँसित व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्माण गर्न. को बासिन्दा, कर्मचारीहरु, र स्वयंसेवकहरु सबै अचम्मको मान्छे हो!
मेरो श्रीमान् र म विगतमा गल्ती गरेका छन्; परमेश्वरको थाह छैन उनलाई एक थिए. आज (3/24) हामी मनाइन्छ 15 विवाहको महिमित वर्ष र हामी परमेश्वरको महिमा र उहाँको प्रेम र अनुग्रह थाह बिना छैन हुनेछ. यो हामी दैनिक हाम्रो बच्चाहरु सम्झाउने कुरा हो!
यो पापी Fundraiser हाम्रो वार्षिक मित्र मा एक उपस्थिति बनाउन अगस्ट 20 औं मा ओयन्सबोरो मा तपाईं हामीलाई thrill थियो!
Kianna • सक्छ 20, 2016 मा 4:14 बजे • जवाफ
म मेरो प्रतिलिपि छन्. म यो हप्ता को अन्त गरेर पुस्तक समाप्त गर्न आशा. म के म यति टाढा पढ्न मजा,
KIANNA • जुन 26, 2016 मा 1:33 बजे • जवाफ
यो मलाई मन पर्छ!
CG • अक्टोबर 30, 2017 मा 10:41 छु • जवाफ
आफ्नो पुस्तक अचम्मको छ यात्रा!! यो मलाई परमेश्वरले मेरो पैदल मा मदत गरेको छ र म फेरि र फेरि बताइरहेका फेला. यसलाई केही ठूलो सिद्धान्तहरू छ. मेरो मनपर्ने अध्याय छ4कुनै सुपर मसीहीहरूले. आफ्नो पुस्तक राम्रो जीवन पनि उत्कृष्ट छ!